01:26:24 am 11-Jul-2020
सुरेन्द्र/युवापोस्ट – म मन्दिर जाने वाला छैन । कुरो मेरो जन्मदिनको थियो, बिहनै पडोसको बाजेले “सुभकामना छ है बाबू, भगवालले तेरो रक्षा गरून् “भनेर मलाई आशिष् दिनुभयो । मैले धन्यबाद भन्दै गर्दा प्रश्न आयो, “अनि बाबु, स्नूकर खेल्न जादैछौ तर मन्दिर गएनौ?” मैले भने, “अह म जादैन त्यो मन्दिर, म रिसाएको छु त्यस भगवानसङ्ग जसले यो दुनिया बनाएर बिर्सीसकेको छ वा मौन छ मानौ कसैले उसको अपहरण गरिसकेको छ । या आज त्यो भगवान कुम्भकर्ण झै मस्त सुतीरहेको छ या भगवानको आँखा फुटीसकेको छ!” उसले देख्न छोडीसक्यो कि उसले बनाएको यो सुन्दर दुनयामा आज के के हुदैछ, कुरुप अनि अमानविय कार्यहरु!
हो, म रिसाएको छु र तबसम्म मन्दिरमा पाइला टेक्दिन जबसम्म गोविन्द गौतमहरु जिउदा हुदैनन! जबसम्म कन्चन्पुर कि निर्मला पन्त अनि लाखौ अरु निर्मलाहरु सहिसलामत घर फिर्ता आउदैनन । भगवान, मलाई तिम्रा पुराण अनि गीतामा भरोसा नभएको हैन । बस त्यहा बाट यो नर्कको डर हटाइदेउ, मेरो प्रश्न के यो डरको प्राथना पनि कुनै प्राथना हो त? कस्तो हुन्थ्यो यदि म जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेला मन्दिर पस्थे र तेरो इबादतमा गहिरो निद्रा अनि तेरो काखमा निदाइदिन्थे?
मलाई तिमीसङ्ग गुनासो छ, एउटा स्याउ खाएको आदमलाई यत्रो सजाय? तागतको गुरुर भयो भन्दैमा सिसीफसलाई आजिवन सजाय? के गीतामा आफ्नो तागतले सारा सांसर नस्ट गर्न सक्ने अभिमान कृष्णले व्यक्त गरेनन र? भगवान तिम्रो खुन उम्लीदैन कि त तिमीलाई लाज लाग्दैन जब यहाँ तेरा पुजारीहरु मन्दिरको निर्माणको नाममा कमिसन अनि चन्दा उठाउदौ छन जब कि गरिबलाई दुई छाक टार्न रोटी नै छैन! र त्यही मुर्तीहरुमा करोडौ रुपैयाँ त यसरी बग्छ जसरी झरना बाट पानी!
तिमीलाई अन्दाजा पनि छ केइ भगवान कि आज तिम्रै नाम लिएर कतिको हत्या समेत हुन्छ? पोहोर मन्दिर पसेर घण्टी छोएको आरोपमा रामु शार्कीलाई जिउदै कोलटारमा हालेर हत्या भयो! कहाँ थियौ तिमी त्यो बेला? बाउले नै छोरीको बलत्कार गरेको समाचार आउदा कहाँ थियौ तिमी? तिमी त सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान अनि अन्तरयामी हैन र? त्यो रोदन सुनेनौ र तिमीले? वृद्दाआश्रमका ती आमाबुवाको पुकार किन सुन्दैनौ तिमी? या त तिमी बहिरो भैसक्यौ या तिम्रो कान छैन या त तिमी नै छैनौ?
गीता १५.१५मा तिमी भन्छौ “सर्वस्री चाहं हृदी सन्निविष्टो” अर्थ “म प्रत्येक जिवको हृदयमा छु!” तिमी भन्छौ, “म जताततै छु! म सर्वव्यापी हु! म प्रकृतिको सबै तत्वमा मौजुद छु!” यदि त्यस्तो हो भने किन लाखै निर्मलाहरु बलत्कृत हुन्छन? के बलतकार पछि हत्या गरिदा बगीरहेको त्यो रातो रगतमा तिमी थिएनौ? न्याय हराइसकेको छ! के उसका आमाबुवाको आँसु सलबलाई रहेको आखामा तिमी थिएनौ र? सायाद तेसैले केही देखेनौ अनि त मौन छौ । के बिरोध परदर्शन गर्दा गोली लागेर अर्जुन भन्डारीको खुट्टा काटिए लगत्तै तिमी पनि अपाङ्ग भयौ र? आउ एक पल्ट आएर हेर आफ्नो दुनियाको हालत! जनसन्ख्या धेरै बढीसकेछ, अब सिर्फ एक नारदले काम चल्दैन त्यसैले अब खबरदारहरुको सन्ख्या बढाउ किनकि ख्रीस्ट त इसाइहरुको भै हाले, बुद्दको आफ्नै एउटा संघ छ! बुद्द, जो एक कमिलामा पनि पैतला परिहाल्छ कि भनेर डराउथे आज उसैको देशमा लास त कागजको टुक्रा जस्तै छर्पस्ट छन!
भगवान कति भिज्छौ र रमाउछौ भक्तहरु को आशुमा? तिमीलाई आफ्नो व्यथा सुनाउदा सुनाउदा आँसु बगाउदा बगाउदा पनि नभिजेको किसानको यो सुख्खा धर्ती के तिमीलाई देखापर्दैन? के किसानको भोक देखिदैन? कि मस्त छौ खादै, मन्दिरमा चडाइएको मोदक र दुध, त्यसैले अरुको भोक बारे जान्न फुर्सद छैन? यहाँ अनाज पैदा गर्ने किसानहरु नै भोकै मरीरहेछन!
अनि तिमी मलाई नर्कको डर देखाउछ? जा म डराउदिन तिम्रो नर्कसङ्ग, यहाँ जिन्दगी नै नर्क भन्दा कहाँ कम छ र? ल म प्राथना गर्न मन्दिर आउछु! कुन मन्दिरमा जाउ म? ढुङ्गाभन्दा बहेक त तिमी कहाँ भेटिन्छौ र? अनि केदारनाथ आउ भन्दा त पैसा नै पुग्दैन! यहाँ कुम्भ मेलामा हरेक वर्ष भागदौड हुन्छ अनि थाहा छैन त्या कति बेवकुफहरु मर्छन? कस्तो हुन्थ्यो यदि म हरिद्वार काशी हिडेर आउथे अनि तिमी एक्लै भेटिन्थियौ त्यहाँ! कस्तो हुन्थ्यो यदि तिमीमा कुनै सन्त महात्माको मात्रै हक हुनेथिएन? तिमी सम्झाउ पैले तिम्रा संकराचर्यहरुलाई अनि आफ्ना मन्दिरका पुजारीहरुलाई कि तिमीलाई सुनको घन्टी चाहिएको छैन! म त्यसपछी बल्ल तिम्रो मन्दिर आउनेछु ।
अहिले तिम्रो मन्दिर आउने मन छैन । जन्ने मन छ किन, ए कथित अन्तरयामी भगवान? त्यो पशुपति मन्दिर भित्र मात्रै सिमित भएछौ सायद सर्वव्यापी तिमी र पो त त्यही चोकको पछडीको एउटा गल्लीमा एक सानी स्कुले बालीका जसको जिब्रो काटीएको छ; भिख माग्दै छे! खै थिएनौ होला सायद जिब्रो काट्दा बगेको त्यो रगतमा तिमी बरु थियौ कि जिब्रो काट्ने हातहरुमा नै? र पो त जिब्रो काट्न शक्ति पाएहोलान ती हातहरुले नत्र त मेरो खण्डमा त बरु म तिम्रो बिराट रुप हेर्न सक्छु होला तर जिब्रो काट्न सामर्थ्य छैनन मेरा हाथहरुमा! म १० वर्षकि उस्लाई १० रुपैया दिएर उसको आदत बिगर्न चाहान्न । म चाहान्न कि उ जीवनभर भिख माग्दै बसोस! म उस्लाइ आफ्नो घर ल्याउन नि सक्दिन केही त घरका परिवार मान्दैनन र केही उसको मालिक मान्दैन! तिमी कथित अन्तर्यामीलाई त थाहा पनि छैन होला कि या नेपालमा बच्चाहरुसङ्ग भिख मगाउने बकाइदा कारोबार हुन्छ । त्यो पनि मन्दिरकै छेउछाउमा तिम्रै नाम लिएर । पहिले बच्चाहरुको अपहरण हुन्छ अनि निर्धारित हुन्छ कसको आँखा फुटाउनुछ अनि कसको के गर्नुछ भनेर!
ल भगवान मैले अब तिमीलाई लगभग सबै भनीसके, अब हेर्छु खै कति अपरम्पार हुन्छन तिम्रा लिलाहरु! कतिको सत्य रहेछ तिमी सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान अनि अन्तरयामी भएको कुरा । हेर्छु खै के गर्छौ तिमी यी बच्चाहरुलाई रिहा गराउन । हेर्छु तिमी बिउझियौ कि छैनौ? हेर्छु तिम्रा कानमा फेरि शक्ति वापस आए कि आएनन सुन्नलाई वृद्दाश्रमका बुढाबुढीको पुकार! हेर्छु तिमी सुन्छौ कि सुन्दैनौ अब लाखौ निर्मलाहरुको चिच्याहट । हेर्छु देख्न पाउँछन् कि पाउदैनन उसका आमाबुवाले न्याय । हेर्छु बनाउछौ कि बनाउदैनौ एक नया संसार जहाँ तिमीमा हक कुनै पुजारीको मात्र हुनेछैन अनि जहाँ रामु शार्की नि पस्न पाउनेछ मन्दिरको द्वार घण्टी बजाउन । जहाँ सुनिनेछ किसानको पुकार । भिज्ने छन किसानका सुख्खा धर्तीहरु अनि दुई छाक टार्न सक्नेछन छन अन्न पैदा गर्नेहरु । अनि बल्ल आउनेछु म तिम्रो मन्दिर, तिम्रो अगाडि शिर पनि झुकाउने छु । अहिले त मलाई लाग्छ तिमी प्राथनाको लायक छैनौ!